"Uye zvese, chero chipi chamunoita pashoko kana pachiito, itai zvese muzita raIshe Jesu, muchivonga Mwari naBaba kubudikidza naye" (VaKorose 3:17).
Ndima yatavhura nayo yakadzama. Inotaura pamusoro pezvinhu zvose zvatingaita. Zvingava zvatingataura. Zvingava zvatingaita. Tinofanira kuzviita muzita raIshe Jesu Kristu. Sei tichifanira kuita izvi? Nokuti tinogara mavari. Takazvarwa navo. Vanotaura muna Johane 15:5 vachiti, "Ini ndini hunde. Imi muri matavi acho ...". Zvekare, muna 1 VaKorinte 6:17, vanoti, "Asi anobatanidzwa naIshe wava mweya mumwe naye". Isu tiri chinhu chimwe chete naKristu. Tiri verudzi rumwe chete navo. Tiri veropa rimwe chete navo. Vanoda kuvona Jesu vanovona isu. Tisu takamiririra Jesu panyika pano. Saka Kristu ndivo vanofanira kuvonekwa patiri. Vanofanira kuvonekwa pahupenyu hwedu. Vanofanira kuvonekwa mutsika dzedu. Vanofanira kuvonekwa pane zvose zvatinoita.
Kristu vanofanira kuvonekwa pauri. Ndivo vanofanira kunzwikwa mumashoko ako. Izvi ndizvo zvakanga zvakaita Jesu. Vaivavona vaibva vatovona Mwari Baba. Pana Jesu ndipo paivonekwa Mwari Baba. Ndipo paivonekwa kubwinya kwavo. Ndipo paivonekwa hunhu hwaMwari. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaHeberu 1:3. Nhasi, ndiwe uri panyika pano. Ndiwe wakamiririra Jesu. Ndiwe Jesu vanozikanwa nenyika. Zita raJesu rava pauri. Saka rarama saJesu ava.
Uri Mwari vari mumuviri wenyama. Izvi zvinofanira kuvonekwa pakurarama kwako. Zvinofanira kuvonekwa mumashoko aunotaura. Hunhu hwako hunozosiyana nehwevanhu venyika ino. Verenga ndima yatavhura nayo zvekare. Inoti wava kuzikanwa nezita raJesu. Saka unofanira kurarama saIshe Jesu. Unofanira kutaura saIshe Jesu. Ukadero, hauzombotaura mashoko anorwadza vamwe. Hauzomborarami nenzira inoshoreka. Mashoko ako anenge achifadza. Zviito zvako zvinenge zvichiyemurika. Ungataura mashoko. Vanhu havazonzwi iwe. Vanozonzwa Jesu. Ndivo zvekare vavanozovona mumabasa ako. Ndivo vavanozovona mune zvose zvaungaita.
Ndiwe wakamiririra Jesu Kristu. Ndiwe wakapfeka Jesu. Rarama semunhu anoziva izvi. Ndizvo zvawava. Usakazvikanganwa. Usapota uchikumura Jesu. Wava nehunhu hwaKristu. Hunhu uhu ndihwo hunofanira kuvonekwa kose kwaungaenda. Ungava muchechi. Ungava kumba kwako. Ungava kubasa. Ungange uri kusangana nevanhu vausingazivi. Usashanduka shanduka. Iva netsitsi nguva dzose. Iva nehunyoro. Ita zvinhu zvinoyemurika. Rarama semunhu akatakura zita raIshe.
Ini ndiri nhume. Ndini ndinomiririra Jesu Kristu. Zita ravo ndiro randava kushandisa. Ndava werudzi rwavo. Izvi zvinovonekwa mumashoko angu. Zvinovonekwa muzvinhu zvose zvandinoita. Shoko raMwari rinopinda mumweya mangu. Nokudaro, rinondishandura. Rinoita kuti ndifanane nezviri muShoko raMwari. Rinowedzera kubwinya kwangu. Rinoita izvi richishandisa simba raMweya Mutsvene. Hareruya!